Wadaadada haweenka / wacdiyayaasha? Muxuu Baybalka ka dhahay haweenka ku jiro wasaarada?
Su’aal: Wadaadada haweenka / wacdiyayaasha? Muxuu Baybalka ka dhahay haweenka ku jiro wasaarada?
Jawaab: Waxaa laga yaabaa inaysan jirin arin dood kulul ee kaniisada maanta badelkii arinta haweenka u adeegayo sida wadaadada/wacdiyaasha. Sida ay sababtay, aad ayay muhiim u tahay inaanan la arkin arintaan sida ragga iyo dumarka. Waxaa jiro dumar aaminsan inaysan u adeegin sida wadaado iyo in Baybalka ku meeleeyay xadeynada wasaarada haweenka, iyo waxaa jiro ragga aaminsan inay haweenka u adeegi karaan sida wacdiyaaasha iyo inaysan jirin xadeynada haweenka ee wasaarada. Tani arin ma ahan ee isla weynida ama takoorida. Waa arin fasiraada baybalka.
Erayga Illaah wuxuu ku dhawaaqay, “Dumarka waa inay bartaan aamusnaan iyo u hogaansanaan buuxdo. Maanan u ogolaan dumarka inay barto ama inay lahaato maamulka ragga dhaafsan; waa inay aamusnaataa” (1 Timoteyos 2:11–12). Kaniisada, Illaah wuxuu u xilsaaray doorar kala duwan ragga iyo haweenka. Tani waxay u sababtahay qaabka ragga loo abuuray iyo qaabka dambiga loo giliyay aduunka (1 Timoteyos 2:13–14). Illaah, illaa rasuulka Bawlos, wuxuu mamnuucayaa u adeegida doorka barida iyo/ama lahaanshaha maamulka ruuxa oo ragga dhaafsan. Nidaamyadaan haweenka oo u adeegayo sida wadaado ragga dhaafsan, taas oo hubaalkii ku jiro wacdintooda iyaga, baridooda ee si shaacsan, iyo tababarka maamulka ruuxa ragga dhaafsan.
Waxaa jiro diidmo badan ee aragtidaan haweenka ee wasaarada wadaadada. Mid caadi ah waa mida Bawlos ka mamnuuco haweenka barida sababtoo ah qarniga koowaad, haweenka caadi ahaan wax ma baran. Si kastaba, 1 Timoteyos 2:11–14 ma jiro meel uu ku sheegay heerka waxbarashada. Haddii waxbarashada ay u aheyd mid u qalanta wasaarada, inta badan xirtii Ciise uma aysan qalmi laheyn. Diidmada caadiga ah ee labaad waa midda Bawlos wuxuu kaliya uu mamnuucay dumarka ee Efesos ka yimid barida ragga (1 Timoteyos waxaa lagu qoray Timoteyos, Wadaadka kaniisada ee Ephesus). Ephesus waxaa lagu yaqaanay kaniisadooda ee Artemis, iyo dumarka waxay ahaayeen maamulada laantaas ee jaahilnimada—sidaas darteeda, aragtida way socotaa, Bawlos wuxuu ka falcelinayay kaliya caadooyinka dumarka hogaaminayaan ee Efesos ee kuwa sannamka caabudo, iyo kaniisada waxay u baahantahay inay ka duwanaato. Si kastaba, buugga 1 Timoteyos wuxuu halkaan ku sheegayaa Artemis, mana sheegin Bawlos heerka dhaqanka ee caabudayaasha Artemis sida sababta mamnuucyada ee 1 Timoteyos 2:11–12.
Diidmada sadexaad waa mida Bawlos wuxuu kaliya oo tixraacayaa nimanka iyo xaasaska guud ahaan. Erayada Gariiga ee “dumarka” iyo “ragga” ee ku jiro 1 Timoteyos 2 wuxuu ula jeedaa nimanka iyo xaasaska; si kastaba, micna aasaaska ee erayada way ka weyntahay midaas. Waxaa dheer, isla erayada Gariiga waxaa loo isticmaalaa aayadaha 8–10. Kaliya waa ragga inay qabsadaan gacmaha quduus ah ee salaada iyada oo aan caro iyo qilaaf jirin (aayada 8)? Kaliya waa xaasaska inay u labistaan si qaabeysan, leeyihiin camal wanaagsan, iyo caabud Illaah (aayada 9–10)? Dabcan ma ahan. Aayadaha 8–10 waxay si ugu wadaan ragga iyo dumarka oo dhan, ma ahan kaliya nimanka iyo xaasaska. Ma jiraan wax ku jiro macnaha inuu tilmaamayo ciriiri nimanka iyo xaasaska aayada 11–14.
Weli diidmo kale ee fasiraadaan dumarka ku jiro wasaarada wadaadada waxay la xiriirtaa dumarka qabtaa boosaska hoggaannimada ee ku jiro Baybalka, gaar ahaan Miriam, Deborah, iyo Huldah ee Baybalka Hore. Waa run in dumarkaan uu Illaah u doortay adeeg gaar ah Isaga iyo in ay u taaganyihiin sida ku dayashooyinka aaminaada, dhiironaanta, iyo, haa, hoggaannimada. Si kastaba, maamulka dumarka ee Baybalka Hore ma quseeyo arinta wadaadada ee ku jiro kaniisada. Baybalka Cusub Epistles wuxuu soo bandhigay qaab cusub ee dadka Illaah ah—kaniisada, jirka Masiixi—iyo in qaabka uu ku lugleeyahayqaaBka maamulka ee gaarka u ah kaniisada, mana ahan qaranka Israa’iil ama jiritaan walboo Baybalka Cusub.
Doodo noocaas ayaa la sameeyay iyada oo la isticmaalayo Priscilla iyo Phoebe ee Baybalka Cusub. Gudaha Acts 18, Priscilla iyo Aquila waxaa loo soo bandhigay sida wasaaradaha aaminaada ee Masiixi. Magaca Priscilla ayaa la sheegay kowdii, laga yaabo inuu tilmaamayo inay aad caan uga aheyd wasaarada baedlkii ninkeeda. Miyuu Priscilla iyo ninkeeda baray baybalka Ciise Masiixi ee Apollos? Haa, gurigooda waxay “u sharaxeen isaga qaabka Illaah aad ugu fillan” (Falimaha Rasuullada 18:26). Miyuu baybalka marnaba dhahay in Priscilla wadaad u noqotay kaniisad ama si shaac u bartay ama noqotay hogaanka ruuxa ee shirka quduusiinta? Maya. Sida fog ee aan ognahay, Priscilla kuma ay lug laheyn howsha wasaarada ee qilaafeyso 1 Timoteyos 2:11–14.
Gudaha Rooma 16:1, Phoebe wuxuu ugu yeeray “adeegto” (ama “adoon”) ee kaniisada iyo si sareyso ayuu u aaminay Bawlos. Laakin, sida ay la jirto Priscilla, ma jiraan wax ku jiro Qoraalka ee tilmaamayo in Phoebe ay aheyd wadaad ama macalinka ragga ee kaniisada. “U suurtogaleyso inay baraan” waxaa la siiyay sida u qalmida waayeelada, laakin ma ahan adeegto (1 Timoteyos 3:1–13; Tiitos 1:6–9).
Qaabka 1 Timoteyos 2:11–14 wuxuu sameeyaa sababta aanan dumarka aysan u noqon karin wadaada si wanaagsan ayay u cadahay. Aayada 13 ku bilaabataa “ee,” la siinayo “sababta” ee qoraalka Bawlos ee aayadaha 11–12. Waa maxay sababta ah in dumarka aysan u barin ama aysan laheyn maamul dhaafsan ragga? Sababtoo ah “Aadan ayaa kowdii la abuuray, kadib Haawo. Iyo Aadan ma aheyn qofka qiyaanay; waxay aheyd dumarka midka la qayaanay” (aayadaha 13–14). Illaah wuxuu abuuray Aadan kowdii iyo kadibna abuuray Haawo si ay u noqoto “caawiyaha” Aadan. Amarka abuurida wuxuu leeyahay isticmaal caalami ah ee qoyska (Efesos 5:22–33) iyo kaniisada.
Xaqiiqda in Haawo la qiyaanay sidoo kale waxaa lagu sheegay 1 Timoteyos 2:14 sida sababta aysan dumarka u adeedi karin sida wadaad ama aysan u laheyn maamulka ruuxa ee dhaafsan ragga. Tani mkicnaheeda ma ahan in dumarka ay la siri karo in dhammaantood aad ugu sahlantahay in la qiyaano wax ka badan ragga. Haddii haweenka oo dhan si aad u sahlan loo qiyaano, maxaa loogu ogolaaday inay baraan carruurta (si aad u sahlan loo qiyaano) iyio haweenka kale (kuwaas oo si aheyn in si aad u sahlan loo qiyaano)? Qoraalka si fudud ayuu u dhahayaa in haweenka ma ahaN inay ragga baraan ama lahaadaan maamulka ruuxiga ee ragga dhaafsan sababtoo ah Haawo waa la qiyaanay. Illaah wuxuu doortay inuu ragga siiyo barida maamulka kowaad ee kaniisada.
Haween badan u dhalaalaan hadiyadaha isbitaalka, naxariista, barida, wacdinta, iyo caawinada. Kuwa badan wasaarada kaniisada deegaanka waxay ku xirantahay dumarka. Dumarka kaniisada lagama mamnuucin ku tukushada bulshada oo saadaalinayo (1 Korintos 11:5), kaliya ka bilow lahaanshaha maamulka barida quduuska ee ragga dhaafsan. Baybalka wuu ogyahay in halkaan ka mamnuucdo dumarka tababarka hadiyadaha Ruuxa Quduuska (1 Korintos 12). Dumarka, sida badan ee ragga, loogu yeero kuwa kale, si loo muujiyo miraha Ruuxa (Galatiya 5:22–23), oo loogu dhawaaqo baybalka lumitaanka (Matayos 28:18–20; Falimaha Rasuullada 1:8; 1 Butros 3:15).
Illaah wuxuu ku amray in kaliya ragga in u adeegayo boosaska barida maamulka ruuxa ee kaniisada. Tani ma ahan sababtoo ah in ragga ay si muhiim macalimiin wanaagsan u yihiin ama sababtoo ah haweenka liitaan ama caqli yaryihiin (taasi oo aan dacwada aheyn). Si sahlan ayay u tahay qaabka Illaah u naqshadeeyay kaniisada inay u shaqeyso. Ragga waxay dajinayaan tusaalaha hogaannimada ruuxa—nololahooda iyo dhinaca erayadooda. Dumarka waxay qaadanayaan door yar oo maamulka ah. Dumarka waxaa lagu dhiirogelinayaa inay baraan dumarka kale (Tiitos 2:3–5). Baybalka sidoo kale kama mamnuuco dumarka barida carruurta. Howsha kaliya ee dumarka ee laga mamnuucay waa barida ama lahaanshaha maamulka ruuxa ee ragga dhaafsan. Tani waxay murangelineysaa dumarka inay u adeegaan sida wadaado ee ragga u ah. Tani kama dhigeyso dumarka mid muhiim yar, oo micno walba, laakin badelkii siiso iyaga wasaarada diirada saarto wax badan ee la heshiiska qorshaha Illaahey iyo u hadiyeynayo iyaga.